Get Legal Help - Somali — ILAP Maine
HEL KAALMO DHINACA SHARCIGA AH
Arabic | French | Haitian Creole | Lingala | Portuguese | Somali | Spanish
WARBIXIN LOOGU TALAGALAY DADKA U BAAHAN KAALMO DHINACA DHARCIGA AH
+ Miyaan xaq u leeyahay adeegyada ILAP?
Adeegyada ILAP waa bilaash ama waa qiimo jaban. Waxaan u adeegnaa danyarta daggan Maine oo kaliya. Waxa lagu weydiin doonaa dakhliga qoyskaaga si aad u codsan karto ballan diiwangelin ah.
Haddii aad u baahan tahay, kaalmo dhinaca sharciga socdaalka ah oo aad u malaynayso in dakhligaagu ka sarreeyo heerka aan oggollahay, waxaan kuu gudbin karraa qareenno madax bannaan oo daggan Maine, aqoonna u leh sharciga socdaalka.
ILAP waxay la shaqayn kartaa dadka Maine ku nool oo kaliya. Haddii aad gobol kale ku nooshahay, fadlan booqo boggayaga “Self-Help Resources” (Adeegyada Socdaalka) si aad uga hesho adeeg meesha aad ku nooshahay.
"SELF-HELP RESOURCES" (ADEEGYADA SOCDAALKA)
+ Maxaan samayn karaa haddii aanan Af-Ingiriis ku hadlin?
ILAP waxay bixisaa turjubaan telfoonka ah ama goobta jooga mar kasta oo telefoon ama “Skype” (Fiidyow la isku waco) lagugu xiriiriyo, ama aad la kulanto shaqaalaha sharci-yaqaanka ah iyo kuwa kaalmeeya. Waxa kaloo aad la iman kartaa turjubaan aad ku kalsoon tahay oo qof weyn ah.
+ Sideen ballan u qabsan karaa?
Haddii aad xaq u yeelato adeegyada ILAP, waa inaad marka hore ballan qabsataa. Markaan ku diiwaangelinayno, waxaan kaa qoraynaa warbixin kooban oo adiga kugu saabsan iyo nooca adeegga ee aad u baahan tahay. Haddii aad daggan tahay meel ka baxsan Maine, waxaad codsan kartaa in ballanta telefoon ama Skype laguugu sameeyo.
Waxaad ballan ku samaysan kartaa telefoonka ama adigoo yimaadda:
Waxaad ILAP kasoo wici kartaa (207) 780-1593
Waxaad iman kartaa xafiiskayaga Portland oo ku yaalla 489 Congress St., Dabaqa 3aad maalmaha Isniin, Talaado, Khamiis ama jImce inta u dhaxaysa 9-ka subaxnimo iyo 5-ta galabnimo.
Haddii ay ILAP ku caawin karto ka dib marka aan wax kaa ogaanno, waxa laguu samayn doonaa ballan cusub si aad ula kulanto sharci-yaqaanka ama kuwa kaalmeeya. Waxa laguu sheegi doonaa warbixinta aad u baahan tahay inaad soo ururiso iyo dukumentiga aad kulanka keeni doonto.
Maadaama aan nahay hay’ad yar, mar walba ma caawin karro qof kasta oo is-diiwaangeliya. Waxa kale oo laga yaabaa inaad ballantaada cusub sugto dhowr todobaad. Waad ku mahadsan tahay dulqaadka iyo garashadaada.
+ Waa maxay adeegyada ay ILAP bixiso?
Haddii aad xaq u yeelato, adeegyada ILAP oo aad dhammaystirto ballanta is-diiwaangelinta, shaqaalaha sharci-yaqaanka ah ama kuwa caawiyaa waxay yeeli karaan in ay:
Kula kulmaan si ay kaaga jawaabaan su’aalahaaga oo ay talo kaa siiyaan sharciga iyo nidaamka socdaalka ee Maraykanka iyo xaaladdaada dhinaca sharciga socdaalka.
Kaa caawin karaan buuxinta foomamka socdaalka iyo codsiyada, waxayna talo kaa siin karaan sharciyada aad u baahan tahay inaad la dirto foomaamkan.
Xaaladaha qaarkood, inay ku matalaan arrimahaaga xafiiska socdaalka ama maxkamadda socdaalka.
Maadaama awooddayadu koobantahay, ILAP ma caawin karto fiisooyinka shirkaduhu bixiyaan ama jaamacadaha Maraykanka lagu dhigto. Sidoo kale, ma caawin karro kiisaska sharciga ee aan ku saabsanayn socdaalka; fadlan booqo boggayaga “Community Partners” si aad uga hesho adeeg-bixiyeyaal kale oo Maine ka jira.
Dhammaan adeegyada ILAP waxa loo baahan yahay in la samaysto ballan ak dib marka la buuxiyo is-diiwaangelinta.
+ Halkeen ILAP ballan uga samaysan karaa?
Haddii aad xaq u yeelato adeegyada ILAP oo aad buuxiso ballanta is-diiwaangelinta, ballanta aad shaqaalha sharci-yaqaanka ah iyo ku caawiya la samaysataa waxay noqon kartaa:
Portland dhexdeeda, goobta 489 Congress St., Floor 3
Lewiston dhexdeeda, goobta 11 Lisbon St., Suite 205
Milbridge dhexdeeda, (Xilliyo go’an)
Ama Telefoon, Skype waraaqo boostada lagu diro.
Ballamaha goobahaas oo dhan waxa laga samaystaa xafiiskayaga Portland. Shaqaalaha ILAP waxay kaala shaqayn doonaan si ay u go’aansadaan goobta kuugu habboon taasoo ku xiran halka aad ku nooshahay iyo xillliga ballan laguu heli karo.
+ Waxaan ah magan-geliyo doon raba oggolaanshaha shaqada, ee ma I caawin kartaan?
ILAP waxay bixisaa foomam ay iskood u buuxsan karaan dadka magan-geliyo doonka ah ee codsanaya karaka oggolaanshaha shaqada.
Haddii aad joogto Portland, waxaad iman kartaa xafiiskayaga maalmaha Isniinta inta u dhaxaysa 1da iyo 4ta galabnimo oo kaliya.
Haddii aad joogto Lewiston, waxaad iman kartaa xafiiskayaga maalmaha jimcaha inta u dhaxaysa 9ka iyo 11ka subaxnimo oo kaliya.
Xillyadan shaqaalaha ILAP ma bixin karaan talooyin sharciga ah. Wixii kale ee su’aalo sharciga ah ku saabsan oo dhan, waa inaad samaysataa ballan is-diiwaangelin ah. Waxaa kale oo ay dadka codsanaya magan-geliyada iyagoo aan haysan qareen ay ka heli karaan boggayaga “Asylum Self-Help” (Magan-geliyo doonka iskii isu caawiya).
“ASYLUM SELF-HELP” (MAGAN-GELIYO DOONKA ISKII ISU CAAWIYA)
“CONNECT” (KU XIRIIRI)
“EMAIL UPDATES” (SOO WARGELIN EMAIL KU TIMAADDA)